Julian Assange ayaa loo oggolaaday inuu haweeney la aqal galo isaga oo xabsi ku jira | Dayniile.com
Home Warkii Julian Assange ayaa loo oggolaaday inuu haweeney la aqal galo isaga oo...
Julian Assange ayaa loo oggolaaday inuu haweeney la aqal galo isaga oo xabsi ku jira
Julian Assange,Aasaasaha Wikileaks oo hadda ku jira xabsi ku yaalla Australia ayaa BBC u sheegay in loo oggolaaday inuu xabsiga Belmarsh uu kula aqal galo marwadiisa Stella Moris.
Isaga iyo Morris waxay aqal galkooda ka hor iisu dhaleen laba carruur ah, iyada oo Morris uurka ilmahaasi ay dhashay xilligii uu Assange ku noolaa gudaha safaaradda Ecuador ee Magaalada London.
Maamulka xabsiga ayaa sheegay in codsiga Mr Assange uu “uu maamulaha xabsi si gaar ah u tixgeliyey”.
Morris waxay wakaaladda PA u sheegtay “iney ku faraxsan tahay oggolaashaha ay maamulka xabsiga ay ka heleen.”
Waxayna intaa raacisay: “waxaan rajeynayaa iney hadda kaddib jiri doonin faragelin kale oo loo geysto guurkayaga.”
Sida uu dhigayo sharciga guurka ee soo baxay 1983-kii maxabiista waxay xaq u leeyihiin iney xabsiga dhexdiisa ku guursadaan marka codsigooda la aqbalo, kharashka arooska ku baxayana iyaga ayaa bixinaya iyada oo ay jirin cid kale oo kharashka ka caawineyso.
Morris oo ah haweeney sharci yaqaan ah oo ku dhalatay dalka Koonfur Africa, wareysi ay Axaddi siisay ‘The Mail’ waxay ku sheegtay tani 2015-kii iney Assange xiriir la lahayd labada wiil ay u dhashayna ay iyadu keligeed korineysay.
Muuqaal lagu baahiyey barta YouTube ee ay Wikleaks leedahay, waxay ku sheegtay Assange iney markii ugu horreysay kulmeen 2011-kii iyada oo ka mid ahayd koox sharci yaqaanna ah oo isaga u doodayey.
Morris waxay intaa ku dartay iney maalin walba safaaradda ku booqan jirtay xilligaasina ay Mr Assange si wanaagsan u baratay .
Lammaanaha oo xiriirkood 2015-kii iisu beddelay jaceyl waxay faraati iisu geliyeen sanaddii 2017-kii.
Morris waxay sheegtay seygeeda Assange labada wiil markii ay u dhalayeen inuu qaab muuqaal toos ah uu kula socday, carruurtana ay aabbahood safaaradda ku booqanayeen.
Assange oo ay da’diisu 50 jir tahay, waxaa ku socda dacwad basaasnimo la xiriirta oo uu ku soo oogay Mareykanka.
Waxaa Mareykanka looga raadinayaa eedeymo la xiriira inuu ku howlanaa helidda iyo shaacinta xogta difaaca qaranka, kadib markii Wikileaks ay daabacday boqollaal kun oo dukumiintiyo sir ah oo la xiriira dagaalladii Afgaanistaan iyo Ciraaq.
Xogaha sirta Wikleaks lagu baahiyey waxaa ka mid ah muuqaal April 2010-ka la baahiyey oo muujinayey ciidamada Mareykanka oo diyaarad qumaatiga u kacda saaran oo hawada sare ka soo tooganaya dad rayad ah oo ku sugnaa dalka Ciraaq.
Australia ayaa tani iyo 2019-kii ku haysay xabsiga Belmarsh, iyada oo markaa ka horna lagu hayey safaaradda Ecuador ee London ugu dambeyntina ay booliska soo xireen iyaga oo ku eedeeyey inuu jabiyey shuruudaha dammaanadda.
2012-2019 wuxuu ku jiray safaaradda Ecuador isaga oo kaga gaashamanayey in Sweden loo dhiibo, maadaamaa dadlkaasi looga soo oogay dacwad la xiriirta xadgudub galmo inuu geystay. Isaga oo mar weliba eeddaasi diidi jiray ayey ugu dambeynti hay’adaha garsoorka dacwaddii laaleen.
Afhayeen u hadlay maamulka xabsiga wuxuu yiri: “Assange codsigiisa ku saabsan inuu xaaskiisa uu xabsiga ku dhex arooso maamulka waa uu qaabilay waxaana la mariyey marxaladah codsiga noocaasi uu maro, ugu dambeyntina waa la oggolaaday si la mdi ah maxabiista kale.”
Previous articleMyanmar: Weriye Mareykan ah oo Xabsi Lagu Xukumay
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo hoygiisa ku hooqday madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Axmed
Dagaal ka dhacay xadka Canfarta iyo Soomaalida Itoobiya
Wararka ka imanaya deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal uu saaka ka dhacay aagga Caydhkaal oo dhanka bari ka xigta Magaalada Cadeyti ee...
Safiirkii ugu horreeyay ee ay Soomaaliya ku yeelatay UK 30 Sano...
Waa tuma gabadha gilgilaysa kursiga HOP097 ee Khadiija Diiriye ay ku...
Waddamada G20 oo maanta ka doodaya sidii dhaqaale loo siin lahaa...
Cabdiraxmaan Cirro “Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa in doorashada madaxtooyadu ku...
Dagaalka Guriceel oo Saakay ka qarxay ayaa Qaboobay